Ma waxaad isku dayayaan in ay diinta aad video files on Yosemite laakiin waxa aan la shaqeeyo? Waa hagaag, waxaad u leedahay in la ogaado in qaar ka mid ah converters video for Mac ayaa joojiyay ka shaqeeya ka dib markii la xariirta in OS cusub X Yosemite. Haddii aad u diraynaa isku soo food saartay, ku rakibidda iyo isticmaalka kale video convertor waa waxa ugu wanaagsan ee aad sameyn kartid. Iyo software ugu fiican ee aad ka fiirsan kartaa rakibidda iyo la isticmaalayo waa Wondershare Video Converter Ultimate for Mac , kaas oo kaa caawin kara in diinta wax video files galay nooc kasta oo ka mid ah qaababka aad rabto.
Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo aad video files galay mid ka mid ah in ka badan 150 video qaabab laga heli karaa. Sidaas waxaa laga yaabaa in kale ugu fiican ee aad u isticmaali kartaa Yosemite. Taas laga soo tago, waxaa jira qalab badan oo video tafatirka heli karo in aad ka heli kartaa software this. Waxaad jari karaa, ku dar caption, ku dar audio, oo wax badan oo aad video.
Qeybta 1: Sida loo isticmaalo VCU Wondershare si loogu badalo video files
Qeybta 2: An kale oo online oo free video Converter
Tallaabada 1 Keenista kasta Video Files Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Raadi folder meesha video aydan xaraysan aad rabto in aad si loogu badalo ku yaalaan. Markaas, si fudud u jiidi files kuwa ka gal ah in ay leeg- ee Converter video ah. Haddii kale, waxaad u tagi kartaa software-ka, riix "File" button ka dibna doortaan kadibna dooro videos aad rabto in aad si loogu badalo.
Tallaabada 2 Dooro Qaabka Output Waxaad doonaysaa For Your faylasha
Waxa soo socda aad u leedahay in la sameeyo waa in ay doortaan qaab wax soo saarka aad file video ah, oo taas loo sameeyo, kaliya furo liiska qaabka wax soo saarka ee software-ka aad taas samayn kartaa adigoo gujinaya qaab icon ee qaybta hoose leeg- tahay software-ka ee. Waxaad heli doontaa liiska faylasha ballaadhinta iyo qalab aad loogu badalo kartaa file warbaahinta in, dooran oo keliya mid ka mid ah oo aad jeceshahay. Hubi in waxa uu doonayaa inuu ciyaaro ciyaaryahanka warbaahinta aad doonaysid in aad u isticmaasho in uu ciyaaro aad video.
Tallaabada 3 Beddelaan Your Video Faylal ay ku Yosemite
Si fudud u riix "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta ku Yosemite. Ka dib markii in, diinta ka bilaabi doonaan. Waxaa jira bar horumar halkaas oo aad ka arki doonaa horumarka qaab beddelidda ah, waxa ay inta badan qaataan oo kaliya dhowr daqiiqo dhammayn, taas oo ku xiran ee faylka baad si loogu badalo. Oo waxaa lagu sameeyey! Waxaad arki doontaa wax soo saarka gal ah oo ku saabsan software si haddii aad rabto inuu u ciyaaro aad video aadan u baahan tahay inaad dhirtuba in files folder aad mar dambe.
Marka laga soo tago kuu badalo aad files warbaahinta qaababka kale ee waayo-aragnimo ah la daawado sahlan, waxa kale oo aad ka fiirsan kartaa gubasho faylka si DVD. Haddii kale, waxaad u badbaadin karin sida image image ISO oo kale oo aad samayn kartaa adiga oo isticmaalaya this software Wondershare la yaab leh!
Sii this video online Converter oo lacag la'aan ah isku day ah oo aad u jeclaan doonaa.
Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone (iPhone 5 / 5S mid)
Sida loo rogo ama MTS in Mpg / MPEG
> Resource > Beddelaan > Sidee inay gool u sarifaan Video Faylal ay ku Yosemite